Novaina ho Marketingtechblog.com | Martech Zone
Alatsinainy, Jolay 7, 2008 Alatsinainy, Novambra 4, 2013 Douglas Karr
Mety ho izany googlecide… Na bilaogy, Ho hitantsika eo. Nanoratra aho omaly fa Tokony tsy nampiasa ny anarako ho anarako.
Na izany na tsy izany, ho hitanao manomboka anio fa novako tamin'ny fomba ofisialy ny sehatry ny tranokala avy amin'ny dknewmedia.com ho martech.zone. Handefa ny URL mandritra ny 6 volana manaraka aho mandra-pahatongan'ny fivezivezena ao amin'ny dknewmedia.com, dia hofongorako tanteraka izany.
Ampahafantariko anao fa sarotra ny tetezamita. Enga anie ka handeha tsara ny zava-drehetra!
Fanamarihana: Tsy hisy fiantraikany izany raha misoratra anarana amin'ny alàlan'ny mailaka ianao na amin'ny RSS.
Tags: sehatrafanovana domain
Fahadisoana bilaogy efatra tokony ho nisorohana
Jul 7, 2008 amin'ny 11: 31 AM
Doug! anarana bilaogy mahafinaritra ary faly fa mandeha tsara ny hetsika!
Tena mirary soa indrindra avy ampitan'ny farihy 🙂
7 Jul 2008 amin'ny 12:26 PM
Raha mbola ataonao tsara ny fanodinana 301 anao, dia tsy tokony ho olana izany amin'ny resaka Google-icide. Tsy hitako izay antony fisotroan-dronono DouglasKarr.com na izany aza. Raha toa ka mamindra ny zava-drehetra amin'ny URL sahaza azy ianao 301, dia hihazona ilay ranom-pifandraisana raha mbola misy rohy miditra mankany DouglasKarr.com (izay mety ho mandrakizay).
7 Jul 2008 amin'ny 12:27 PM
Toa milamina hatreto, azoko antoka fa hahomby ho anao daholo izany, Doug.
Ary koa, miloka aho fa faly i Doug Karr. 🙂
7 Jul 2008 amin'ny 12:32 PM
Ary IZANY no antony tiako ny Feedburner. Tetezamita tsy misy tohiny ho an'ireo mpanjifa.
7 Jul 2008 amin'ny 4:56 PM
Heveriko fa fihetsika feno fahendrena ity Doug. Ny anaran'ny sehatra vaovao dia mifanentana kokoa amin'ilay akany nokendrenao, ary toa ny voalazan'i Willy etsy ambony, raha mbola manana ny fanamboarana 301 fanodinana tsara ianao dia tsy tokony hijaly ny milina fikarohana anao.
7 Jul 2008 amin'ny 6:44 PM
Aza kivy be, Doug.
Hanao soa ihany ianao. 🙂
Ny tiako holazaina dia mbola namaky azy io aho.
Jul 8, 2008 amin'ny 5: 53 AM
Nafindra ny URL-ko tamin'ny volana Janoary ary hitako fa nanampy be ny fanovana ny feed toa anao.
Na izany aza dia nanapa-kevitra ny tsy hiala amin'ny tranokalako taloha aho. Manana rohy be dia be avy amin'ny bilaogy sy tranokala hafa mankany amin'ilay tranokala taloha aho, mbola mahazo fivezivezena miditra marobe avy ao. Ny ankamaroan'ny olona nametraka ahy teo amin'ny blogroll dia manana ilay tranokala taloha. Ny olona sasany dia mbola mampiasa ny tiana fa tsy RSS. Betsaka ny valin'ny google no mbola tranonkala taloha.
Na eo aza izany, mirary soa anao indrindra amin'ny tetezamita.
Aug 13, 2008 amin'ny 12: 35 AM
Manantena aho fa hanao lahatsoratra tohiny amin'ity iray ity ianao.
Rehefa nividy ny anarako voalohany aho dia adala no nifidy iray miaraka amina hyphen ao. Tsy olana lehibe io, fa zavatra izay ovako ihany amin'ny farany.
Liana aho hahafantatra ny fiantraikan'izany eo amin'ny ezaka SEO sy ny fifamoivoizana.
Aug 28, 2008 amin'ny 3: 35 AM
Tena tsara raha afaka mamoaka lahatsoratra momba ny fomba fanaovanao ny famindrana ianao, izany hoe ahoana ny fomba nifindranao ny fametrahana ny WordPress, ny fomba fanovana ny redirect, ny torohevitra rehetra nianaranao teny an-dàlana.